IAmerican Indian Commerical Fodya Chirongwa - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA MaIndia eAmerica
YEMAHARA KUSHANDISA TOBACCO RIYA RUBATSIRO
Chinyakare mashandisiro efodya mutsika dzeAmerican Indian akasiyana zvakanyanya kupfuura mashandisiro anokurudzirwa nevagadziri vefodya vekutengesa. Chikamu chisingaenzaniswi chevaIndia vekuAmerican vanoshandisa fodya yekutengesa zvichienzaniswa nemamwe marudzi muUnited States. Makambani anotengesa fodya akatarisa maIndia ekuAmerica mukushambadzira, kutsigira zviitiko uye kupa, kuronga mazano ekusimudzira uye kushandisa zvisirizvo mifananidzo nemifungo kubva mutsika dzeAmerican Indian.
Kufanana nezvimwe zvinhu zvinopinda muropa, kana fodya ichishandiswa zvisina kufanira kana kushandiswa mukuvaraidza, inokuvadza. MaIndia ekuAmerica vanoita zvetsika mashandisiro efodya vanonzwisisa izvi uye vanoganhurira mashandisiro ayo pamhemberero chete. Nhau dzekuti sei fodya yakapihwa kumaNative America kuminamato yakapihwa kwezviuru zvemakore. Kushandiswa kwefodya yechinyakare kunobatsira kugadzira kubatana nezvizvarwa zvekare uye kunotsigira hupenyu hwakanaka uye nharaunda ine hutano yanhasi uye mune ramangwana.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro fodya yechinyakare uye mashandisiro ayo
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro fodya yekutengesa
Iyo AMERICAN INDIAN KUSHANDISA TOBACCO Chirongwa
Kurega fodya yekutengesa kunogona kunetsa, asi rubatsiro rwuripo. Nyoresa muAmerican Indian Commerce Fodya Chirongwa kuti uwane rubatsiro rwemahara, rwetsika nemagariro kuti urege fodya, kusanganisira:
10 coaching inoshevedza nevanozvipira veko makochi
Kusvikira kumavhiki masere ezvimedu zvakasununguka, chingamu kana lozenges
Kutarisa pakushandisa fodya, kusanganisira fodya isina utsi
Yakagadzirirwa kurega rubatsiro rwakavhurika kune vese vanhu vemuVermont, kusanganisira vechidiki vari pasi pemakore gumi nemasere
IAmerican Indian Yekutengesa Fodya Quitline yakagadziriswa nemhinduro kubva kunhengo dzeTribal kumatunhu akati wandei.
Nyaya Yegorosi Amai
Fonera toll-yemahara 1-855-372-0037 kubatana zvakananga neAmerican Indian Commerce Fodya Chirongwa varairidzi.
Varairidzi vatatu vanotora mafoni Muvhuro-Chishanu, 3:8 am - 30 pm EST.
Iwe unogona zvakare kusvika kuAmerican Indian Commerce Fodya Chirongwa varairidzi nekufona 1-800-QUIT-IZVO.
Shanyira American Indian Yekutengesa Fodya Chirongwa Website.
Wana zvimwe zviwanikwa zvinosanganisira mameseji mabhodhi, zvekudzidzisa, zvakagadziriswa kurega kuronga chirongwa uye kurega kufambira mberi kwekutevera.
Kuti udzidze zvakawanda nezve fodya netsika uye kuwana zvimwe zviwanikwa, shanya Chengetedza Icho Chitsvene: National Native Network .